Waraysiyada, 01 January 2016
Khamiis 1 January 2016
Wasiirka ayaa ka qeyb galaya shir ku saabsan qaabka loo wadaagayo khayraadka iyo shidaalka dalka Soomaaliya.
Taliyaha waxa uu dawladda Maraykanka waydiistay in tababar la siiyo saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
Xaaladda magaalada Gaalkacayo ee badhtamaha Soomaaliya ayaa degganayd maanta kaidb dagaalladii shalay halkaais ka dhacay oo ay ku dhintene ugu yaraan 7 qof, in ka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada waxa aku suganw afdi ka socda dawladda federaalka
Wareysi: Taliyaha Nabad Sugida Qaranka
Wareysiga ayaa Taliyaha Nabad-Sugidda Soomaaliya Gen. Cabdiraxmaan Tuuryare waxa uu kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee Muqdisho iyo amarro cusub oo dowladda ay soo rogtay.
Wareysi: R/W Cabdi Faarax Shirdoon Saacid
VOA-da ayaa weydiisay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid caqabadda dowladda ka heysata ka hortagista weerarada ka dhanka ah hoteellada.
Indha Qarshe: Waa Been Warbixinta QM
Gen. Daahir Aden Cilmi “Indha Qarshe” oo wareysi siiyey VOA-da, ayaa warbixintaas ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin oo la been abuuray.
VOA-da oo Warreysatay Richard Stengel
AMISOM:Kama Soo Bixin Shabeelada Hoose
Afayeenka AMISOM Paul Njuguna oo u waramayay VOA ayaa beeniyay in AMSIOM ay ka baxday saldhigyo ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeelada Hoose. Wuxuu sheegay in tani qeyb ka tahay dib u qaabayn ay ku sameynayaan ciidankooda.
Faafaahin: Weerarkii Shabaab ee Qoryooley
Warar iyo faahfahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka wareysanay guddoomiyaha Shabeellada Hoose C/Qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Cumar Hadliye oo maanta ka dhoofay magaalada London, ayaa wareysi uu arrimo badan kaga hadlay siiyey idaacadda VOA-da.
Kaliil oo Garbahaarey Tagay iyo Xiisad Jirta
Tegitaanka Kaliil ee Garbahaarey, ayaa xiisad ka dhalisay magaalada, kadib markii ciidamada Ethiopia ee jooga magaalada ay isku hareereeyeen gurigii uu ku sugnaa Kaliil.
Indhaha Caalamka ayaa inta badan u weecday qaxootiga Suuriyiinta ah iyo kuwa kale ee dalalka carabta ee rabashaduhu ay ka jiraan ee soo buux dhaafshey dalalka Hungry, Austri iyo Germalka, si u helaan nolol iyo nabadgalyo.